सेप्टम्बर बर्थस्टोन नीलमणि निलो रंग नयाँ अपडेट २०२१
नीलम सेप्ट बर्थस्टोन रंगको पुरानो र आधुनिक दुबै सूची अनुसार सेप्टेम्बर बर्थस्टोन हो।
सेप्टेम्बर बर्थस्टोनको अर्थ के हो?
एक जन्मस्टोन एक मणि हो जुन सेप्टेम्बरको जन्म महिनासँग सम्बन्धित छ: नीलम.
नीलम एक बहुमूल्य रत्न हो, खनिज कोरुन्डमको एक किसिम, एल्युमिनियम अक्साइड समावेश गरी तत्वहरूको ट्रेस मात्रा जस्तो कि फलाम, टाइटेनियम, क्रोमियम, भ्यानियम, वा म्याग्नेसियम.
सेप्टेम्बरको बर्थस्टोन रंग के हो?
सेप्टेम्बर बर्थस्टोन कहाँ पाइन्छ?
सेप्टेम्बर बर्थस्टोन गहना के हो?
कहाँ सेप्टेम्बर बर्थस्टोन पाउन?
सेप्टेम्बर बर्थस्टोनको राशि संकेतहरू के हुन्?
यो सामान्यतया हो नीलो, तर प्राकृतिक sapphires पहेलो, बैजनी, सुन्तला र हरियो रंगहरूमा पनि देखा पर्दछ। सामान्य, प्राकृतिक sapphires काटेको छ र रत्न मा पॉलिश र गहनाहरु मा लगाईन्छ।
ब्लू नीलम यसको प्राथमिकको विभिन्न मिश्रणहरूमा अवस्थित छ नीलो र माध्यमिक रuesहरू, विभिन्न टोनल स्तरहरू र संतृप्तिको विभिन्न स्तरहरूमा
नीलमणि जलोमा निक्षेपहरू वा प्राथमिक भूमिगत कार्यबाट खनन गरिन्छ। नीलमणिका लागि वाणिज्यिक खनन स्थानहरू सामेल छन्, तर निम्न देशहरूमा सीमित छैन: अफगानिस्तान, अष्ट्रेलिया, म्यानमार, कम्बोडिया, चीन, कोलम्बिया, भारत, केन्या, लाओस, मडागास्कर, मलावी, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तंजानिया , थाइल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, र भियतनाम।
नीलमणि विभिन्न भौगोलिक स्थानहरूको बिभिन्न उपस्थितिहरू वा रासायनिक-अशुद्धता सांद्रता हुन सक्छ, र विभिन्न प्रकारका माइक्रोस्कोपिक समावेशहरू समावेश गर्दछ।
हामी बेच्न सक्छौं नीलम घण्टी, ब्रेसलेट, झुम्का, नेकलेसहरू र अधिक। जब हामी मध्ये सेप्टेम्बरको जन्मेको पत्थर, नीलमणि, सोच्दछौं, हामी समुद्रको गहिरो, शाही निलो कल्पना गर्छौं।
त्यहाँ राम्रो छ हाम्रो पसलमा नीलो नीलमणि बिक्रीको लागि
सेप्टेम्बर बर्थस्टोन, नीलमणि, कुनै समय दुष्टता र विषाक्तताबाट जोगिन मानिन्छ। यस्तो विश्वास गरिएको थियो कि नीलमणिले बनाएको भाँडामा विषालु सर्प मर्नेछ। परम्परागत रूपमा पुजारीहरू र राजाहरूको मनपर्ने ढु stone्गा, नीलमणि शुद्धता र बुद्धिको प्रतीक हो।
कन्या र तुला पत्थर दुबै सेप्टेन्ट बर्थस्टोन हुन्।
जे होस् तपाइँ कन्या र तुला हो। नीलम सेप्टेम्बर १ देखि 1० सम्मको ढु stone्गा हो।
सेप्टेम्बर 1 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर2कन्या नीलम
सेप्टेम्बर3कन्या नीलम
सेप्टेम्बर4कन्या नीलम
सेप्टेम्बर5कन्या नीलम
सेप्टेम्बर6कन्या नीलम
सेप्टेम्बर7कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 8 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर9कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 10 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 11 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 12 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 13 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 14 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 15 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 16 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 17 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 18 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 19 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 20 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 21 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 22 कन्या नीलम
सेप्टेम्बर 23 तुला नीलम
सेप्टेम्बर 24 तुला नीलम
सेप्टेम्बर 25 तुला नीलम
सेप्टेम्बर 26 तुला नीलम
सेप्टेम्बर 27 तुला नीलम
सेप्टेम्बर 28 तुला नीलम
सेप्टेम्बर 29 तुला नीलम
सेप्टेम्बर 30 तुला नीलम
हाम्रो मणि पसलमा बिक्रीको लागि प्राकृतिक निलो नीलमणि बर्थस्टोन
नीलो नीलमणि 7.45 सीटी
नीलो नीलमणि 2.69 सीटी
नीलो नीलमणि 2.11 सीटी
नीलो नीलमणि 2.59 सीटी
नीलो नीलम 1.50 CT
नीलो नीलमणि 2.52 सीटी
नीलो नीलमणि 1.56 सीटी
नीलो नीलमणि 1.51 सीटी